Vaovao - Arakaraka ny maha lafo azy no tsara kokoa?
Ny olona sasany mahay mitondra fiara, fa mety tsy hahafantatra tsara ilay fiara. Rehefa nalefa tany amin'ny garazy ny fiara dia matetika no nanao izay nasaina nataony izy ireo, ary mety tsy fantany hoe ohatrinona ny vola laniny. Ka rehefa mila plug-bolo vaovao ny fiaranao dia fantatrao ve hoe inona ny tadin'afo tena tadiavinao?
Inona no atao hoe bara?
Spark plugs dia ny faritra ampiasain'ny rafitra fandrehitra maotera. Ny filaharana dia ateraky ny fivoahana eo anelanelan'ny electrodes, izay tompon'andraikitra amin'ny fandrehitra ny fifangaroan'ny gazy ao anaty varingarina, izay tompon'andraikitra amin'ny fanombohana ny fiara.
Noho izany, raha hitanao fa sarotra ny manomboka ny fiaranao amin'ny fanjakana mangatsiaka, raha miaina freins, tsy miasa na mihena be ny fiakaran'ny motera ianao dia manana olana amin'ny bara.
Ny tompon-trano dia mila manamarina ny bara amin'ny andavanandrom-piainany. 60 000 km na 100 000 km ny androm-piainan'ny jiro matetika, ary afaka manana fizahana isaky ny 10.000 na 20.000 km ny tompony.
Ahoana ny fomba hijerena bara?
Eo an-tampon'ny varingarina misy motera no misy ny bara. Aorian'ny hanesoranao azy dia mila jerena tsara ny toetrany. Matetika isika dia manamarina ireo tasy karbonika, triatra sokatra, maratra ary elektroda tsy mahazatra. Ankoatr'izay, ny tompony dia afaka manamarina ihany koa ny fipetraky ny bara araky ny fanjakana mitondra fiara, ohatra, ny fiara tsy afaka manomboka amin'ny fotoana iray na misy fikorontanana tsy fantatra sy fiatoana tsy fantatra mandritra ny fitondrana fiara.
Raha vao lasa mainty sy misy karbônina ny plug dia mora vahana. Afaka manadio irery ny tompony. Raha tsy dia be loatra ny karbaona, dia azonao atao ny mandroboka vinaingitra ao anaty vinaingitra mandritra ny 1-2 ora ary esory madio toy ny vaovao. Raha misy karbaona betsaka dia azonao atao koa ny mampiasa mpanadio manokana izay manome ny vokatra fanadiovana tsara kokoa. Fa raha hitanao fa vaky na matahotra ny bara, dia ny fanoloana mivantana no safidy tsara indrindra.
Arakaraka ny maha lafo azy no tsara kokoa?
Misy karazan-tsilo hafa, toy ny vovo-drongony nikela sy varahina miaraka amin'ny androm-piainany manodidina ny 20.000 kilometatra, plug-n'ny iridium miaraka amin'ny androm-piainany 40000 ka hatramin'ny 60.000 kilometatra ary plug-platinum manana androm-piainana 60000 ka hatramin'ny 80,000 kilometatra. Mazava ho azy, arakaraky ny halavan'ny androm-piainany no mahalalany ny vidiny.
Ny olona sasany dia mety handany vola be amin'ny andiana vovo-jiro iridium aorinan'izy ireo mandre momba ny bitroka iridium dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny herin'ny fiarany. Aorian'ny fanoloana sy fampiasana azy ireo dia ho hitan'izy ireo fa tsy misy fanatsarana ny haingam-pandeha. Raha ny marina, ho fanatsarana ny fahombiazan'ny herinaratra ao amin'ny fiara, tsy dia lafo kokoa noho izany ny tsara kokoa. Ny plug-in tsara dia manome fanampiana amin'ny fampandehanana herinaratra amin'ny fiara, saingy miankina amin'ny motera ihany koa io fanampiana io. Raha tsy mahatratra haavo iray ny fahombiazan'ny motera, ny plug-in mandroso kokoa dia tsy hanana fanampiana be loatra amin'ny fampisehoana herinaratra.
Fotoana fandefasana: Jul-16-2020